Isitudiyo esizolileyo esinokufikelela ngasese kumasango e-Amiens
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEmilie
I-94% yeendwendwe zakutshanje inike uEmilie iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Esi situdiyo somgangatho omnye esinokufikelela kwabucala sigcinelwe wena. Ifumaneka kwidolophu yaseArgoués kumasango e-Amiens, entliziyweni yamachibi aseSomme kwaye kufuphi ne-towpath - indlela yebhayisekile yeSomme.
Ukuhlala ukuphumla, imizuzu embalwa ukusuka kwisixeko.
Esi situdiyo se-11 m2 esinomnyango wabucala sikulungele ukuhlala okufutshane komntu omnye okanye ababini.
Ixhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini, itafile, izitulo ezibini, ikhitshi (iketile, i-microwave, izitya kunye nefriji) kunye negumbi lokuhlambela (isinki, ishawa kunye nendlu yangasese). Isitudiyo sivula kwi-terrace kunye negadi yendlu ofikeleleka kuyo.
Ikofu, iti kunye neswekile zibonelelwa, ngokunjalo neetawuli kunye nelinen yokulala.
Kwindawo: umabonwakude, iwashi yerediyo, i-wifi, iincwadana zabakhenkethi.
Indawo yokupaka yasimahla iyafumaneka kwiimitha ezimbalwa ukusuka endlwini.
Abakhweli bebhayisikile kunye nabakhweli bamkelekile kuba istudiyo sibekwe kumda webhayisekile yeSomme kwaye sibonelela ngendawo yokuhlala yebhayisekile ...
Ulwazi oluthe vetshe apha: "La Véloroute Vallée de Somme" kwiwebhusayithi yeBhunga laseSomme.
Kwisiza: iindawo zokuloba, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile ecaleni kwendlela yokuhamba elunxwemeni lweSomme, iSamara Park, iziko lemidlalo yamanzi (Saint Sauveur), ukukhwela iphenyane kunye neWakeboarding-Amiens Cable Park.
Kwilali, uya kufumana indawo yokutyela (Les Marais Chauds) kunye nesiza se-Amiens Cable Park ethi, kwimeko yemozulu entle, ibonelele ngamashwamshwam emdeni wamanzi kwindawo yokuvuka.
I-Amiens: I-cathedral ye-Gothic, iindawo zokuhlala ezindala (i-Saint-Leu), i-Les Hortillonnages. Isitudiyo siphakathi kwamabala edabi aseSomme kunye neelwandle zaseBaie de Somme.
4.87 · Izimvo eziyi-143
Siya kukuvuyela ukukunceda!
Nantsi ividiyo encinci yokufumanisa i-Amiens:
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Argœuves